mata Music na ndị a 3 music ude égwu
Otú e si amata Music na ndị a 3 music ude égwu
Part 1.How mata Music na Shazam
Part 2.How mata music na Soundhound
Part 3.How mata Music na Hound
1. Olee mata Music na Shazam
Shazam aghọwo otu nke kasị mma ngwa n'ihi na e ji music. Ọ na-ewepụ na-agwụ ike ọnọdụ ebe ị na-ekpe humming a song na ị na-amaghị onye na-ese bụ ma ọ bụ aha nke song. Nke a bụ karịsịa a nsogbu na-ewere na e nwere ọtụtụ songs a tọhapụrụ na kwa ụbọchị na otu nwere ike mfe na-na-elu. Ezie na e nwere ọtụtụ ngwa nwere mara mma nke ukwuu ime otu ihe ahụ Job, Shazam dị ukwuu n'ihi na n'otu ntabi njirimara nke music, ịgagharị, ịzụ na nkekọrịta, ya ọbụna na-egosipụta TV gburugburu gị. Tụgharịa na Nchekwa onwe Shazam na ọ ga-ahụta music na TV ọbụna mgbe ngwa na-ekpe abaghị uru. N'ihi ya, ọ pụrụ inyere gị aka lelee trending ụda si gburugburu ụwa, ma na-ọhụrụ ọdịnaya kwa ụbọchị si ọkacha mmasị gị Shazamed artists.
Music n'ọbá akwụkwọ
Ngwa-akwado iOS na fim bụ 3.9 nke na-atụ aro na ọ na-họọrọ nkezi site ọrụ.
Uru nke-eji nke a software na-agụnye ikike na-achọpụta ọhụrụ music, gee ntị na redio na-egwu music. Ọghọm na-agụnye na ọ bụ nanị maka iPhone na iPad na mgbe nile mkpesa na ha ahịa ọrụ.
Ị nwere ike ibudata a ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/shazam/id284993459?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Otú e si amata music iji Shazam
Mgbe na nbudata na wụnye ngwa. Ẹkedori ya
Mgbe a song ị chọrọ ịmata na-akpọ, na-enweta Shazam Logo
Ngwa ga-chọọ na-egosipụta ihe ọmụma na peeji nke.
2. Olee mata music na Soundhound
SoundHound a kọwara dị ka ọnụ ụzọ ámá na-music search, chọpụtara na play. Ọ bụkwa otu nke ngwa na aghọwo ezigbo n'ụwa ebe music emepụta hapụ albums na kwa ụbọchị ma na-eburu ya na ezi songs na-aghọ a mgba, ma ọ bụ na kpochapụwo song na ị na mberede na-anụ na ụzọ gị na-arụ ọrụ ma i chefuola onye na-ese bụ na aha. Ọ bụ ike n'ihi na ya nwere ikike ịmata music ebre gburugburu gị n'etiti ndị ọzọ ịtụnanya atụmatụ. Ọ dị ukwuu n'ihi na n'otu ntabi-akọwapụta songs na ọbụna ịhụ lyrics, tinye na Rdio ma ọ bụ Spotify playlist, òkè na ndị enyi, ịzụta ma ọ bụ inyocha ọzọ si artists ị maara na ịhụnanya ma ọ bụ dị nnọọ chọpụtara.
Old akwụkwọ music
Na-abụ abụ na humming ude
SoundHound N'akwụkwọ akụkọ
The mba nke ngwa bụ 4.5 nke na-atụ aro na ọ họọrọ na n'elu tụnyere yiri ngwa. Ọ na-akwado iPhone na iPad.
Uru nke na-eji nke a ngwa-agụnye ikike na-ege ntị ghọtara song, gee ntị na redio, na-achọta ọhụrụ music. Ọghọm agụnye mmachi NJ a ọnwa.
Ị nwere ike ibudata a ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/soundhound/id355554941?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Ịmata music iji SoundHound
Download ngwa si nyere URL, wụnye ya na ẹkedori ya na ngwaọrụ gị
Mgbe a song na-akpọ gburugburu gị. Kpatụ SoundHound bọtịnụ n'otu ntabi mata songs na-ahụ ọbụna lyrics.
3. Olee otú aka ịmata Music na Hound
Hound bụ otu n'ime n'elu ngwa maka ịmata music. Ọ bụ karịsịa ewu ewu n'ihi na ya ngwa ngwa music ude. Ị adịghị mkpa pịnye ihe ọ bụla, ị chọọ na olu gị: na-ekwu okwu ya, nweta ya. Ị pụrụ ịsị aha a song ma ọ bụ ịgbakọta na i maara na-imejụ agụụ ozugbo. Ọzọkwa, pụrụ ịdabere na ya na ahịa nkwado ka ọ dị iche n'ebe ndị nke ọzọ. A na-esochi na-ekwu pụrụ igosi otú ọrụ na-enweta ezigbo ahụmahụ nke ngwa.
Nkwado maka asụsụ dị iche iche
Nzi nkekọrịta na-elekọta mmadụ na netwọk
Na-egosipụta song mgbe ị na-agwa ya
akụkọ ihe mere eme atụmatụ
The ngwa dị maka iOS, Android na windows igwe. Ọ na-gosiri 3.3, n'ihi ya nkezi ranking.
Uru: ya nkwado maka ndị anya isi, ọ bụ n'efu, na-enye song lyrics, ọnụọgụgụ na zuru ogologo videos.
Ụkọ ihe ụfọdụ: na music ude atụmatụ ka kwesịrị nmepe.
Ị nwere ike ibudata ngwa si ​​URL; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier.hound
Ịmata music iji Hound
Download ngwa si URL nyere n'elu na awụnyere na ekwentị gị na ẹkedori ya.
Kpatụ Hound button
Gwa ozugbo na o doro anya n'ime ngwaọrụ gị okwu (ala nke ngwaọrụ ma ọ bụ site Maị-nyeere headset on iPods). Ị pụrụ ịsị a song dị ka "Tinye Me Na site Chris Brown". Ma ọ bụ i nwere ike dị nnọọ ikwu a gbalaga aha ma ọ bụ a song aha: "West Ndụ" ma ọ bụ "Unbreakable".
Mgbe na-ekwu okwu, enweta Hound button ọzọ.
(Ike ọrụ n'ọnụ n'ihi na ọbụna ngwa ngwa nzaghachi: ị nwekwara ike pịa ma jide Hound button, ikwu okwu, na ntọhapụ bọtịnụ.)
Apple Music Store FAQ: Ihe ọ bụla mkpa ka ị mara
Funny Ringtones maka ekwentị
Top 6 music track / artist nchịkọta akụkọ
> Resource> Music> Olee Amata Music na 3 Music Ịghọta égwu